चिन्तन चौतारी: 2013
Posted by Chandra Magar at 7:20:00 PM No comments:
सयौको माझमा पनि बिरानोमा एक्लो छु म
हाँसी रहे झै गरे पनि आसुँ लुकाइ रुदैछु आज
हर्षित पार्न मनलाई भौतारिदैछु उनकै लागि
पर्खि पर्खि बसेकोछु फर्क मेरी शान्ती!
कोइ जादुगरले लायो कि मोहनी तिमीलाई
निष्ठुरी बनिकन छाडेर हिड्यौ मलाई
नदेखाउन अरुलाइ चाहेको जस्तो नानाभाँटी
रातदिन बिलापमा छु फर्की आउ है शान्ती ।
पश्चिम पुगें लुम्बिनी भेटेन कोइ पनि
मध्य भ्याएँ स्वयम्भु र पशुपती घुमी
जहाँ धाएँ मनमा तिम्रै अभाव कान्ती
पूर्व लागें तिमीलाई पाउने आशमा शान्ती ।
धेरै थिए साट्नु पर्ने कुराहरु जीवनका
सत्य थिए वाचाहरु झुटा होइनन यौवनका
सोध्न गएँ भ्रिकुटीलाई भेटिइन जानकी नि
सवै भन्छन मेरो लागि तिमी नै हौ रे शान्ती ।
बोलाए नि अरुले तिम्रो नाम चिच्याइ चिच्याइ
अङाल्न आतुर छु पिरतीको मान्द्रो बिछ्याइ
मौनतामा भित्र भित्रै तिम्रै याद झलझली
फूलमाला उन्न थाल्छु आउ है मेरी शान्ती ।
चाडै आउ है मेरो आँखाको ज्योति बनी
हुने छ संसार हराभरा नत्र खरानी
टद्पिदैछु एक्लै एक्लै तिम्रै नाम जपी
चौतारीमा कुर्दै हुन्छु आउ है प्यारी शान्ती
मेरी मनकी प्यारी शान्ती ।
११ भाद्र २०६१
Posted by Chandra Magar at 2:43:00 PM No comments:
गाउँ र शहर
गाउँ भन्नु गाउँ हो
शहर भन्नु शहर नै
यही नै त छ भिन्नता ।
शहरको जननी हो - गाउँ
शहरीयाको पुर्ख्यौली हो - गाउँ
गाउँ सुसम्पन्न हो
शहर सुसज्जित हो
ए! मेरो साथी, आउ
हामी सँग-सँगै एउटा ठाउँ जाउँ ।
गाउँको त्रिष्णा मेट्नलाई
मैले कसरी शहर रोज्नुँ?
यहाँ गाउँमा जस्तै
कहाँ हुनु - स्वच्छता
कहाँ देख्नु - सुन्दरता
कहाँ पाउनु - आत्मियता
धेरै नै भो गाउँ नगा’को पनि
ए मेरो साथी
म त अचेल पाखे भाछु ।
ए शहरीया साथी!
जाउँ मसङै हिड उतैतिर ।
२८ मार्च, २०१२
यसैलाई भन्दा हुन
चखेवाका जोडा-जोडी ।
मन पलायो होला
प्रेम फुल्यो होला
र त यो सुघन्ध फैलियो ।
चरम सुख हो कि!
असह्य पिडा भोग्नुछ
तर प्रसव रहर छ
जन्म दोधार छ
तर विश्वाश छ ।
सबै हाँस्न थाल्यौं
तर कस्तो यो
जनम - भय
मृत्‍यु - भय
अनौठो जीवन - मान्छेको
यही रैछ खुशीको चाङ ।
०३ मे, २०१२
Posted by Chandra Magar at 1:17:00 PM No comments:
गीत: म त्यही हुन्छु
जती निर्मम ठान्छौ मलाई निर्दयी म छैन
जती कोमल सोच्छौ त्यती नरम पनि छैन
मलाई बुझ्न नजिक आइ मुटु छाम्नै पर्छ
चोखो माया फुलाउन त बेर्ना सार्नै पर्छ
सुख दु:ख दुबै छन मेरो पनि जीवनमा
चाहेको पाउनै पर्छ भन्या छैन यो मनमा
मिल्ने जती खुशीहरु अरुसँग बाड्नै पर्छ
हृदयहरु साटिकन हाँशी-खुशी बाँच्नै पर्छ
कहिले काही हातहरु खोसिए झै लागे भने
कहिले तिम्रो आँखाहरु पोखिए झै लागे भने
आँशु पुछ्दै अधर चुम्न म समिपमै हुन्छु
हात ठाम्न साथ दिन सधैं म त्यही हुन्छु ।
Posted by Chandra Magar at 1:05:00 PM No comments:
अलग थिए बाटाहरु मिलाएर गइन् उनी ।
बुन्दै थिए सपनाहरु बिलाएर गइन् उनी ।
हरियाली देख्थें सारा, सधैं सुन्दर दृष्‍टि
स्थिर मेरा नजरहरु हिलाएर गइन् उनी ।
खोपिकन रित्तो रित्तो, मेरो मन-मुटु भरी
अनगिन्ती यादहरु दिलाएर गइन् उनी ।
जुगौ बाँच्न खुशी साट्न, सङै खोज्यौ संजीवनी
ऐले बिषका प्यालाहरु पिलाएर गइन् उनी ।
सुहाएन कि निष्ठुरीलाई, ओदाएको आफ्नोपन
फाटेका ति साइनोहरु सिलाएर गइन् उनी ।
Posted by Chandra Magar at 12:56:00 PM No comments:
दिदीको गीत: तिज
चुल्होचौको दिकीजाँतो गर्नु पर्ने दिनभरी
भित्र-भित्रै माइतीकै याद मनभरी ।
साथीसङी भाइ र बहिनी रुदै थिए म आउँदा
कती खुशी हुन्छन होला माइत म जादा ।
बुवाआमा बुदाबुदी भाइ र बहिनी सानै छन
साँझ बिहान कसोगरी के के खाँदै छन ।
जन्म घर छाड्नै पर्ने छोरीको कर्म यो
कसले बुझ्न सक्ला बरै हाम्रो मर्म यो ।
Posted by Chandra Magar at 12:50:00 PM No comments:
भै गयो कमरेड! कती गर्छौ खोक्रो भाषण हामीलाई
के-के नै गर्छु भन्थ्यौ झन्, चर्को भो शासन हामीलाई ।
मार्यौ, मार्न लायौ हाम्रै दिन पक्का आउछ भनी
रगतले लपक्क लट्पटियौ, खै त सिंहासन हामीलाई ।
लालाबाला टुहुरो बनाइ, पुछ्यौ सिन्दुर चेलीको
लुकी-छिपी अझै पाप् गर्ने, दिदैछौ कासन हामीलाई ।
सारा दु:ख बिर्सिकन लडि जित्यौ तिम्रो लागि
अपाङ्ग भो बस्ती आज, देउ खाने राशन हामीलाई ।
अनी चटक्क छाडेर
पुन: अर्को ताक्छ ।
घुमाइ फिराइ हेर्छ
मन पर्छ/मन पर्दैन
एकनाश हुन्न रैछ
आफ्नै जिन्दगी ।
नितान्त फरक ।
हिलो र पानीमा फुल्ने फूल
आज बिस्तारै रोयो ।
अचेल खोज्दैमा बित्दो छ
स्थाइ जिन्दगी ।
Posted by Chandra Magar at 1:14:00 PM No comments:
जाउ साथी घुम्नलाई लिवाङ बजार
जन्माउने रोल्पालाई लगाउ नजर
जलजला पहाड उस्तै साहस
अरुको छैन भो तिम्रै छ आश
नदिमा पुल छैन गाउँमा बिजुली
हिजो झै आज छन् सोझा रोल्पाली
न पानी न शिक्षा न त उपचार
सेवा नै धर्म हो गरौ उपकार
सङ्लो छ माडी झन् सङ्लो यो मन
स्पर्श गर्न आउ सुनिदेउ धड्कन
Posted by Chandra Magar at 1:32:00 PM No comments:
प्रिय जिन्दगीको ।
संक्रमणकालिन समयको घेराभित्र
बन्दी पारिएको म
कि पार लाउनु पर्ने
कि भार ठाम्नु पर्ने ।
मस्किदै आइन् अगाडिबाट
पार लाउन गाह्रो लाग्यो
निसंकोच डुबुल्की मारे
फनफनी त्यो भुमरीमा
बेस्सरी सर्किएँ जानी-जानी
सवाल थियो जिन्दगीको ।
जोशिदै आइन् पछाडिबाट
भार ठाम्न गाह्रो लाग्यो
निसंकोच खुट्टालाई ठेस लाएँ
अनायस ठुलो ठक्कर खाइ रन्थनिएँ
गुज्रिनु थिएन खराब जीवनसँग
सवाल थियो मेरै जिन्दगीको ।
दाँया हेर्छु, बाँया हेर्छु
उनी हुन्छिन सङ-सङै
माथि हेर्छु, तल हेर्छु
न पार लाउनु पर्ने
न भार ठाम्नु पर्ने
यो जित दुई जिन्दगीको
सवाल रै'छ यि दुई जिन्दगीको ।
Posted by Chandra Magar at 1:30:00 PM No comments: